ကျော်မယ် ခွမယ် မသိသေးသူတွေ သိရအောင် တဆင့် ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကျော်မယ် ခွမယ် မသိသေးသူတွေ သိရအောင် တဆင့် ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ကျော်မယ် ခွမယ် မသိသေးသူတွေ သိရအောင် တဆင့် ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Posted by ဆူး on Sep 1, 2010 in Computers & Technology | 12 comments
ဒါကတော့ ၀င်ကြည့် လိုမရတဲ့ဆိုဒ်တွေကိုကျော်ကြည့်လို့ ရတဲ့ဆော့ဝဲနဲ့ ကျော်လို့ ရတဲ့ဆိုဒ်တွေပါအသုံးတော်တော်တည့် ပါတယ်.. သူကတော့ ကျော်ခွဖို့အတွက် ခါးတောင်းကျိုက် မနေပါနဲ့တော့ . ခေါင်းစားမနေပါနဲ့တော့ . အိနြေ္ဒရရလေးနဲ့ add-on လေးသုံးပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ကျော်ကြည့်ရအောင်ပါ . လုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် . တစ်ဆင့်ချင်းသာ လုပ်သွားပါ . firefox add-on ကို သုံးဖူးသူကတော့ ချက်ချင်းသဘောပေါက် သွားမှာပါ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် .
* ဒီကို https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3239 သွားလိုက်ပါ . Add to firefox ကို နှိပ်ပါ .
* Download Now နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် install လုပ်လိုက်ပါ * Firefox Browser ကို restart လုပ်လိုက်ပါ .
(တစ်နည်းအားဖြင့် firefox နှင့်ဖွင့်ထားသမျှတွေအားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ ပြန်ဖွင့်ပါ .)
* Firefox screen ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာ အပြာရောင် P ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒါဆိုရင် phproxy ကို သုံးလို့ရသွားပါပြီ . စမ်းကြည့်လိုက်ပါ .
* ပိတ်ထားသော ၀ဘ်ဆိုက်တွေ နှင့် Website တစ်ခုခုကို ဖွင့်ရင်းနဲ့ Access Denied page ပေါ်လာလျှင
် အပြာရောင် P လေးကိုသာ နှိပ်ပြီး ခဏစောင့်လိုက် ပြီးတာနှင့် ပိတ်ထားသော website ပွင့်လာ ပါလိမ့်မယ်။
www.polyslove.com အဲဒီမှာကျော်လို့ရတာ အများကြီးဘဲ youtube တောင်ကြည့်လို့ရတယ်။﻿
ကျေးဇူးပဲဗျာ..ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းက လူတွေအတွက်တော့ အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်ဗျာ..။
နောက်ဘလော့ကာတွေအတွက်ရောပေါ့..။ နောက် ကျော်တာခွတဲ့နည်းလမ်းများရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးဗျာ..။
ပြည်တွင်းမှာ နေရာတိုင်းသုံးလို့ရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ မန္တလေးနှင့် ရတနာပုံမှာတော့ရမယ်မထင်ဘူးနော်.။ စမ်းသတ်ပြီး သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် အသိပေးကြပါအုံးနော်..။
https://addons. ကိုဝင်လိုက်ပါတယ် mozillacorpotion(us) ဆိုပြီး addons စာတန်းရှေ့မှာအစိမ်းရောင်နဲ့ပေါ်
လာပါတယ်နောက်အောက်မှာတော့အဖြူချည်းဘဲပေါ်ပါတယ် bookmarks addonsကိုနှိပ်လိုက်တာ
addonsforfox ပေါ်ပါတယ် add to firefox မတွေ့ရပါ၊တွေ့တဲ့ download ကိုနှိပ်လိုက်တော့လဲ
အဲဒီက လင့်အတိုင်းဝင်ပြီး ပြောတဲ့ အတိုင်း နိပ်လိုက်တာ သူဟာသူ အလိုလို အပ်သွားတာဘဲ မပြောတတ်ဘူး ဒီမှာတော့ ၀င်သုံးလို့ရတယ် အောက်က လင့်တွေသုံးစရာကို မလိုတာ သူဟာသူ အော်တိုကို ၀င်သွားပြီး ကျော်သွားလို့ရတယ် သိသလိုဘဲ ရေးလိုက်တာဆိုတော့ သေချာ မရှင်းပြတတ်ဘူး သေချာ ရှင်းပြတတ်တဲ့ သူများ ရှိရင် ဒီထက် ပိုရှင်းအောင် ရှင်းပြပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ကြည့်ချင်တာတွေ ကျော်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ တကယ်ပျော်မိပါတယ်
သတင်းထူး ထပ်ပြောရအုန်းမယ် တင်သာ တင်လိုက်တယ် ဟိုနေ့ကတော့ ရတယ် မနေ့က စပြီး အဲဒီလို သုံးလို့မရတော့ဘူး bagan က ပိတ်လိုက်ပြီ မရတော့ပြန်ဘူး။ နည်းလမ်းတော့ ထပ်ရှာနေတယ် ရရင် ထပ်တင်ပေးမယ်
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ မန္တလေးဂေဇက်မှာ ပြည်တွင်းက မင်ဘာတွေ စာရေးလို့ ရလာတဲ့ပွိုင့်တွေကိုစုထား၊ ပြီးတော့တပေါင်းထည်း ငွေထုတ်ပြီး ရတနာပုံဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂံတယ်လီပေါ့ ဖြစ်ဖြစ် ဝယ်လိုက်ကြရင် ဟိုကျော်ဒီခွ ဆိုတဲ့ ဒုက္ခတွေ ငြိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ပွိုင့်တွေက နဲနေသေးရင် ကိုကေအေအိုင် ကို ပွိုင့်ကြိုထုတ်ပေးဖို့ ဝိုင်းတိုက်တွန်းကြတာပေါ့။
ဦးလေး ကြောင်ကြီး နည်းလမ်းကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဦးလေး ကြောင်ကြီး ထောက်ခံစာ ရေးပေး
ကျွန်တော်က တော့ access kit နဲ့သုံးတာတောင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့ဆိုက်အကုန်ပွင့်ပါသည်။
ရတယ် ဟိုရက်တွေက မနေ့က စပြီး သုံးနေရင်းနဲ့ တခုချင်းစီပိတ်ပိတ်သွားတာ နေ့လည်လောက်ရောက်တော့ အကုန်ပိတ်သွားပြီ
အခုလို ဖြန့်ဝေပေးတာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ
လူတိုင်း ကိုယ်သိတာတွေဖြန့်ဝေပေးမယ်ဆိုရင် တိုးတက်မှုမြန်ပါလိမ့်မယ်
ဒီခွေသူတောင်းစားတွေကစောင့်ကြည့်နေတာ ကျော်ကြည့်ဘို့တင်ပေးလိုက်ယင် သူတို့လဲမြင်တာကို ပိတ်မှာပေါ့ အကောင်းဆုံက ကျော်ကြည့်တဲ့ဆိုက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်emailကနေပို့ပေးယင်အကောင်းဆုံးဘဲ ဒါတောင်မသင်ကာတဲ့ကောင်ဆိုပို့မပေးနဲ့ ….